Simba Brigid yeL Kildare - Chipiri cheEreland yeIreland
Mutsvene Brigid weK Kildare - Mariya weGaels
A Short Biography yeChishanu Saint yeIreland
Mutsvene Brigid, kana kuti ave akanyatsokodzera Saint Brigid weL Kildare, mutsvene wezita rakasiyana: Brigid yeIreland, Brigit, Bridget, Bridgit, Bríd, Mukadzi, Naomh Bhríde kana "Mary weGaels".
Asi ndiani chaizvo uyu aiva Brigid, anoremekedzwa mumachechi kumusoro uye pasi, uye achimupa zita kune vakawanda mugutaji (se "Kilbride", chaizvoizvo "Church of Brigid")?
Kurarama kubva pa451 kusvika ku 525 (maererano ne hagiography uye kubvumirana kwevakatendeka), Brigid aiva musungwa weIrish, abbess, muvambi wevakatenda vakawanda, akabata nzvimbo yebhishopu uye nokukurumidza kazhinji ainamatwa sevatsvene.
Nhasi, Brigid inofungidzirwa kuti ndeyevatsvene vemaIreland, vanongoraramira chete (uye nechepamucheto kadiki) shure kweSatrick Patrick pachake zvakakosha. Mutambo wake wezuva, Mutsvene weBhri Brigid , ndiFebruary 1, uyewo zuva rokutanga rechitsime muIreland. Asi ndiani chaizvo aiva Brigid?
Holy Brigid - A Short Biography
Nenzira, Brigid inofungidzirwa kuti yakaberekerwa kuFaughart ( County Louth ). Baba vake vaiva Dubhthaki, mutungamiriri wechihedheni wechiLeinster, amai vake Brocca, muPikitish Christian. Brigid akatumidzwa zita ramwarikadzi Brigid weDhuhthach, mwarikadzi wemoto.
Muna 468 Brigid yakashandurwa kuva chiKristu, sezvo yakanga iri mufaro wekuparidza kwaStatrick kwechinguva. Baba vake havana kufara paaifunga kushuva kupinda muhupenyu hwechitendero, vachimuchengeta pamba pakutanga. Ikoko akazozivikanwa nokuda kwekupa kwake uye rudo: Haana kumboramba chero murombo akauya achigogodza pamusuo weDubhthach, imba yacho yaida kuwanika mukaka, hupfu uye zvimwe zvakakosha.
Asina chimwe chinhu chaaigona kupiwa, akatopa bakatwa rake rababa rimwechete kune ane maperembudzi.
Dubhthach akazopedzisira apinda, uye akatumira Brigid kune imwe imba, zvichida kungozvidzivirira.
Kugamuchira chifukidziro kubva kuna Saint Mel, Brigid akatanga basa rake semusangano wekutanga, kubva kuClara ( County Offaly ). Asi basa rake muLildare rakava rakakosha zvikuru - munenge mugore ra470 akateya Kildare Abbey, musha weku "co-ed" kune vose vatungamiri uye vatongi.
Kildare inobva ku -cill-dara , zvinoreva kuti "chechi yomuouki" - sero raBrigid iri pasi pegiti guru rekiki.
Sezvisina maturo, Brigid yakabata simba guru-chaizvoizvo yakava bhishopi mune zvose asi zita. Mhuri yeL Kildare yakanga ine simba rekutonga rakaenzana neyebhishopi kusvikira 1152.
Kudya mukati kana kunenge kwakapoteredza 525, Brigid akatanga kuvigwa muguva pamberi peatari yakakwirira yeKaldare's abbey chechi. Gare gare marara ake anonzi akadzingwa ndokuendeswa kuArtpatrick - kuzorora pamwe nevamwe vaviri vatsvene veIreland, Patrick naColumba (Columcille).
Iko Kunamata KweChinamato Brigid
MuIreland, Brigid yakakurumidza uye ichiri kuonekwa sevatsvene-vatsvene vatsvene shure kwePatrick - nzvimbo yakamutsigira zita rakanyanyisa rokuti "Mary weGaels" (zvichida akanga ari mhandara, asi zvirokwazvo akanga asina kuberekwa nemhandara) . Brigid inoramba iri zita rakakurumbira muIreland. Uye mazana emamwe mazita-mazita ekukudza Brigid anowanikwa muIreland yose, asiwo muScotland yekuvakidzana: Zvose zvakakurumbira Kilbride (Chechi yeBrigid), Templebride kana Tubberbride inongova mienzaniso mishomanana.
Vamishinari veIrish vakagadza Brigid mutendi anozivikanwa wevahedheni vakashandurwa muEurope zvakare - kunyanya munguva yekuvandudza nguva isati yavandudzwa Brigid yeL Kildare yaiva nevateveri vakawanda veBritain nevekune dzimwe nyika, kunyange zvazvo kusiyana kwevamwe vatsvene vemuzita rimwechete kune dzimwe nguva kunopisa.
Chiratidzo cheSaint Brigid's Cross
Maererano nenyaya, Brigid akaita muchinjikwa kubva kumhanya kune murume akafa uyo aida kutendeuka. Kunyangwe mhedzisiro yenyaya iyi isingazikamwi, kunyange nhasi mhuri dzakawanda muIreland dzine Bhuku reChristian Brigid mukuremekedzwa kwevatsvene. Muchinjikwa unogona kutora mhando dzakasiyana, asi pakuonekwa kwawo yakawanda inobata (kure) kufanana nechiganda kana swastika.
Kunze kwezvikonzero zvechitendero, kuchengetedza Mutsara weChristian Brigid munzvimbo yawo yepamutemo kune njere kune zvinoshanda: Unofungidzirwa kuti kurembera muchinjikwa kubva padenga kana padenga pachako inzira inodzivirira moto yekuchengetedza imba kubva mumoto. Cherechedza kuti chimwe chekugadzirwa kweBrigid muL Kildare chaiva moto usingaperi. Uye kuti mwarikadzi wechihedheni aakatumidzwa zita ... aiva mwarikadzi wemoto.
Ko Brigid Mutsvene Angave Ari Mwarikadzi Here?
Zvechokwadi aikwanisa - sezvinoreva nheyo, akatumidzwa zita remwarikadzi wechihedheni Brigid, uye zvakawanda zvingano zvake zvechiKristu zvinoratidza zvimwe zvemwarikadzi uyu (kufanana nokutsamwa nemoto).
Saka vamwe vanhu vanomiririra kuti Brigid yakangodaro shanduro yakasununguka yemwarikadzi wekare, kwete vatsvene vechokwadi. Zvakanaka, iwe unogona kuzviita iwe pachako pamusoro peizvi ... uchapupu hwakaoma hunoshaya.
Hondo yeA Boyne Visitor Center
Kubhadhara Imotokari muIreland
Zvose pamusoro Moore Moore Street Market
Nguva Yei Ireland Inotanga Bhizinesi?
Kubva kuJutland kuenda kuBelfast - HMS Caroline
Mashoko Anonakidza Pamusoro Pema Cutty Sark - Pakupedzisira kweTeal Tea Clippers
Yardbird Southern Table uye Bar kuVenetian Las Vegas
Ndeapi Weather muChit West?
Kwokugara Kwayo Pedyo ne George Bush Intercontinental Airport
Paradhiso Coast, Florida
January 2018 Mhemberero uye Zviitiko muMexico
Zvirongwa zvepahotera: Zvaunotarisira
Kunyaradza Rudo Kuverenga
Inbounds Kudzoka Kwetsika Extreme Skiing ku Steamboat muColorado